समानताको लडाइँ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
असार २१, २०७६ रामजीवी पन्त
जब पहिलो पटक पानीजहाजमा लामो यात्रा गरियो । हाम्रो यात्रा बाल्टिमोरको बन्दरगाहबाट सुरु भयो । सन् १८१४ मा बेलायतसँग भएको युद्ध (ब्याटल अफ बाल्टिमोर) मा अमेरिकीहरूले यो बन्दरगाहलाई प्रयोग गरेका थिए । बाल्टिमोरबाट बर्मुडासम्मको ५ दिनको हाम्रो यात्रा क्यारेबियन क्रुजमा हुने तय भयो । साथमा थिए भाइ कृष्णजीवी र बालसखा भाइ राजन त्रिपाठी ।
पानीजहाजमा लामो यात्रा गर्नुअघि यात्रीहरूलाई केही विशेष ज्ञान र निर्देशनहरू दिइन्छ । हामी पनि पहिलो दिन ती निर्देशनहरू पाएपछि आफ्ना कोठातिर लागियो । सफा र सुन्दर कोठाको सजावट अविस्मरणीय थियो । एटलान्टिक महासागरलाई आफ्नो शयनकक्षबाट नियाल्द मलाई शान्त र विशाल समुद्र साँच्चिकै रोचक लाग्यो । अनन्तसम्म फैलिएको जस्तो लाग्ने नीलो पानी । पानीको सतहमा छाल, अन्तर्यमा हज्जारौं जीव । यी सबैलाई बोकेर कुनै लामो यात्रामा निस्केको यात्रीजस्तो लाग्ने सुन्दर समुद्र ।
समुद्रमाथि चिप्लिइरहेको पानी जहाजभित्र स्पा, साउना, क्यासिनो, जिम, पब, बार, स्विमिङ पुलका अलावा नाटकघर, सांगीतिक प्रस्तुति र पुस्तकालय पनि थिए । यी सबै चीजले गर्दा लामो यात्रा पनि यात्रीलाई लामो लाग्दैन । र, एकोहोरो यात्रा पट्यारलाग्दो हुँदैन । करिब ३ हजार यात्रुको व्यवस्थापान निकै कुशल थियो ।
जहाजका ‘क्रु’ हरूको सीप र दक्षता उत्कृष्ट थियो । स्वादिला परिकार त हुने भई नै हाले । कहिले नाटक त कहिले नृत्य हेर्दै, संगीत सुन्दै, डिस्कोमा नाच्दा–नाच्दै रात बितेको थाहा हुँदैन थियो । बर्मुडा टापुमा सन् १५०५ पहिलो पटक स्पेनको सामुन्द्रिक जहाजका क्याप्टेन जुन दी बेर्मुडेज पुगेको मानिन्छ । उनकै नामबाट यस टापुको नामकरण गरिएको इतिहास छ ।
बर्मुडाको नाम सुन्नेबित्तिकै धेरैको नाममा बर्मुडा ट्र्यांगलको छवि आउँछ । बर्मुडा ट्र्यांगलमा छिरेका ठूलाठूला जहाजहरू गायब भएका त्रासद कथाहरू छन् । यो ट्र्यांगल (त्रिभुज) को एउटा कोणमा फ्लोरिडा छ भने अर्कोमा बर्मुडा र तेस्रो कोणमा पोर्तोरिको छ । बर्मुडा ट्र्यांगल शब्दको पहिलो पटक प्रयोग अमेरिकी लेखक विनसेन्ट गड्डिसले सन् १९६४ मा ‘आरगोसी’ नाम पत्रिकामा ‘द डेड्ली बर्मुडा ट्र्यांगल’ शीर्षकमा लेख लेखेर गरेका थिए ।
यस ट्र्यांगललाई सैतानहरूको समुद्र पनि भन्ने गरिन्छ । यो ट्र्यांगलमा छिरेका अजंगका पानीजहाजहरूको अहिलेसम्म अवशेषसमेत नभेटिएका उदाहरण छन् । असामान्य रूपमा जहाजहरू गायब हुनुको कारण सामुद्रिक ज्वारभाटा र भुमरीहरू भएको वैज्ञानिकहरूको ठम्याइ छ । तैपनि, रहस्यहरू नसुल्झिएका कारण यो ट्र्यांगललाई रहस्यमयी नै मानिन्छ ।
सन् २०१७ को मे महिनामा स्काइलाइट समूहका संस्थापक तथा सीईओ जेनिफर ब्लुमिन ३ र ४ वर्षका छोराहरू जहाजमा गइरहेकी थिइन् । लिएर पाइलट नाथन उर्लिचले पुर्तोरीको नजिकै २४ हजार फिटमाथि जहाज उडाइरहेका थिए ।
फ्लोरिडाको पूर्वी समुद्र तटको सानो गाउँ तितुस भिल्लाका लागि उडेका उनीहरूको यात्रा बर्मुडा ट्र्यांगलमा आएर समाप्त भयो । हामी भने बाल्टिमोरदेखि बर्मुडासम्म ८ हजार १ सय ८५ किलोमिटरको यात्रा करिब ४५ घण्टामा पार गर्दै बिहान ११ बजे बर्मुडा ट्र्यांगललाई धेरै पर राख्दै गन्तव्यमा पुग्यौं ।
सन् १७०७ को स्कट्ल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड एकीकरणपश्चात् यो टापु बेलायतको अधीन छ । कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत काला जातिका रहेको यो टापुको मुख्य आयस्रोत कृषि र पर्यटन हो । ६७ हजार जनसंख्या रहेको यो टापु ट्याक्स हेवनका साथै गल्फरको स्वर्गका रूपमा पनि परिचित छ । ५३.२ वर्गमाइल क्षेत्रफल रहेको यो टापुमा ६ वटा गल्फ कोर्स छन् । बिहानको खाना खाएर बर्मुडाको राजधानी ह्यमिल्टन घुम्नलाई समुद्रको किनारै किनारै निस्कियौं ।
गल्फ कोर्स र समुद्र तटको दृश्य मनमोहक थियो । ह्यमिल्टन जाँदै गर्दा हरिया गल्फ कोर्सहरू देखेर मलाई ह्यम्जाबाट पोखरा जाँदा देखिने हरिया फाँटको याद आयो । हृयमिल्टनका नीला समुद्रले पोखराका नीला ताललाई सम्झाइदिए । यिनको समुद्रमा खाली एकै चीजको कमी थियो, माछापुच्छ्रे छाया ! त्यो त यिनले खोजेर पनि कहाँ पाउन् !
ह्यमिल्टन सहरमा कोट, हाफ प्याइन्ट, टाई, लामा मोजा अनि छालाका जुत्तामा सजिएका युवाहरू देखिन्थे । यिनको पहिरन देखेर मलाई अचम्म लाग्यो । साधारण सामुद्री तटमा मात्र पुगेको अनुभव भएकाले गुलाबी बालुवाको तटको सुन्दरता देख्दा प्रकृतिको सिर्जनालाई मानव कलाले उछिन्न गाह्रै पर्छजस्तो लाग्यो ।